ဝေလမင်းသမီး Diana နဲ့ ချိန်းတွေ့ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာကို ပြန်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ Bryan Adams
ကမ္ဘာကျော် Rocker ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Bryan Adams ဟာ ကနေဒါနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တုန်းက အမေရိကားနိုင်ငံထဲမှာ စတင်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Cuts Like A Knife ဆိုတဲ့ album နဲ့ စတင်ကျော်ကြားလာခဲ့တဲ့ အဆိုတော်ကြီးတစ်ယောက်လို့ သိရပါတယ်။ ဂီတဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သတ်လို့ ဆုတွေအမျိုးမျိုးရခဲ့ဖူးတဲ့ Rock အဆိုကျော်ကြီး Bryan Adams ဟာ အခုတော့ ၅၈ နှစ်အရွယ်ကို ရောက်နေခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီတော့ မီဒီယာစာမျက်နှာတွေထက်မှာလည်း ခဏခဏ မမြင်ရတော့ပါဘူး။
Come along! #hamburg #germany #concert #martinguitar @dsquared2 #bryanadamsultimate
A post shared by Bryan Adams (@bryanadams) on Jun 18, 2018 at 9:01pm PDT
Singing with @keithscott99 #brandnewday sometimes he’d lay awake thinking bout the things that he never told her – so onastarry night fromanoisy bar, he telephoned her; you could come down I’ll meet your train – she just laughed and said some people never change…Get Up get up get up.. #mannheim #germany??
A post shared by Bryan Adams (@bryanadams) on Jun 19, 2018 at 3:51pm PDT
ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့ညတုန်းကတော့ Bryan Adams ကို တီဗီအစီအစဉ်တစ်ခုမှာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ Watch What Happens Live With Andy Cohen ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်က Plead The Faith ဆိုတဲ့ Game ထဲမှာပါ။ အဲဒီ Game မှာ နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်တွေဟာ ဖြေဖို့အခက်တွေ့ အကျပ်ရိုက်စေမယ့် မေးခွန်းသုံးခုကို အမေးခံရတာပဲ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Bryan Adams အနေနဲ့ အဲဒီအစီအစဉ်မှာ ပထမဆုံး အမေးခံရတဲ့ မေးခွန်းကတော့ ပြန်ဖြေဖို့အတွက် နည်းနည်း မျက်နှာပူစရာပါ။ ဝေလမင်းသမီး Diana နဲ့ အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်ကြီး Elton John ရဲ့ ၄၂ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ပွဲတုန်းက Bryan Adams ဟာ သူ့ရဲ့ ယောကျ်ားတန်ဆာဓာတ်ပုံကို မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ ဟုတ်သလား… ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။
အဲဒီမေးခွန်းကို Rocker ကြီးက ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲလိုပုံကို သူပေးခဲ့ပါတယ်လို့ ဖြေရုံတင်မကဘူး။ သူပေးတဲ့ လက်ဆောင်ပုံကို Elton John ကြီးက မငြင်းမဆန် လက်ခံခဲ့ဖူးတဲ့အပြင် ဒီဓာတ်ပုံဘောင်ကို လဲရမယ်လို့တောင် ပြောခဲ့ပါသေးတယ်လို့ ရယ်မောမောနဲ့ ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အခုဆို ပုံကို ရွှေဘောင်တောင် ကွပ်ထားတယ်ထင်တယ်လို့လည်း ထပ်ဖြည့်ပြီး ခပ်သောသော ပြောပါသေးတယ်။ သူတို့ ဘော်ဒါအချင်းချင်းတွေ ဆေးထိုးပုံက အဲဒီလို ကြမ်းချက်ပါပဲ။ ဒုတိယမေးခွန်းကိုတော့ Bryan Adams ဟာ တော်တော်လေး သတိထားပြီး ဖြေခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ မေးခွန်းကတော့ သူနဲ့ ဝေလမင်းသမီး Diana တို့တွေ ချိန်းတွေ့ခဲ့ကြဖူးတယ်ဆိုတာ ဟုတ်သလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့က အကောင်းဆုံးသော သူငယ်ချင်းတွေပါ။ တခြား ဘာအကျိုးအမြတ်ကိုမှ မမျှော်ကိုးပဲ ခင်မင်ခဲ့ကြတာပါ”
နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ နာမည်ကြီးတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ရတာ ဘယ်လိုနေလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။ အဲဒါကိုတော့ လူတွေ သိပ်စိတ်မဝင်စားကြဘူးလို့ သိရပါတယ်။
အများစု စိတ်ဝင်စားသွားကြတာက အဲဒီအစီအစဉ်ထဲမှာ မင်းသမီး Diana နဲ့ပတ်သတ်လို့ Bryan Adams ဖြေသွားတဲ့ အဖြေကိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ Bryan Adams ဟာ အဲဒီမေးခွန်းကိုဖြေရင်းနဲ့ ကားမတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့် ဆုံးပါးသွားခဲ့ရတာ ၂၁ နှစ်လောက် ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ဝေလမင်းသမီး Diana ကို သတိရသွားပုံလည်း နည်းနည်းပေါ်သွားခဲ့သလိုပါပဲတဲ့။ သူ့အဖြေကြောင့် သွားလေသူရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို တစ်ခုခု ပေစွန်းသွားမှာကို စိုးသွားပုံလည်း ရပါတယ်တဲ့။
ဒါဆို သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ တကယ်ရော တွဲခဲ့ဖူးကြသေးတာလား…?
တကယ်ပဲ မိတ်ဆွေအဆင့်ပဲ ရှိခဲ့ကြတာလား….?
ဒီကောလဟာလဟာ တကယ်ဟုတ်၊ မဟုတ်ဆိုတာကို အရွယ်ရှိတုန်းက တအားရုပ်ဖြောင့်သလို အရမ်းလည်း အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ Bryan Adams နဲ့ ကောင်းကင်နိုင်ငံကို ပြန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီး Diana တို့ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မသိနိုင်တာကတော့ အမှန်တရားတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ။
PREVIOUS POST Previous post: Earphone လေးတွေ ကြာရှည်ခံအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ?
NEXT POST Next post: Nicki Minaj ဆိုတာကို လုံးဝမသိပါဘူးလို့ ဗြောင်ကျကျ ပြောလာတဲ့ Lil’ Kim